कोभिडपछि बालबालिकामा जटिल समस्या ‘एमआइएस-सी' देखिँदै, कान्तिमा ६ जना भेटिए :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कोभिडपछि बालबालिकामा जटिल समस्या ‘एमआइएस-सी' देखिँदै, कान्तिमा ६ जना भेटिए
के हो एमआइएस-सी?
कमला गुरुङ शुक्रबार, पुस ३, २०७७, १८:२२:००
काठमाडौं - कान्ति बाल अस्पतालमा तीन महिनाको अवधिमा ६ जना बालबालिकामा ‘मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटोरी सिन्ड्रोम’ (एमआइएस-सी) देखिएको छ। जसमध्ये एक जना बालकको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ।
असोजदेखि हालसम्म ६ जना बालबालिकामा मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटोरी सिन्ड्रोम देखिएको अस्पतालका निर्देशक डा कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। उनले भने, ‘यस अस्पतालमा कोभिडपछि बालबालिकामा यो सिन्ड्रोमको समस्या देखिन थालेको छ।’
कोभिडपछि बालबालिकामा देखिने एक प्रकारको जटिलता अवस्थालाई मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटोरी सिन्ड्रोम भनिने उनले जानकारी दिए।
बालबालिकामा कोभिडपछि यस किसिमको जटिलता देखिन थालेको उनले बताए। उक्त ६ जना बालबालिका २ देखि १३ वर्ष उमेर समूहका रहेको उनले जानकारी दिए।
निर्देशक पौडेलका अनुसार यी ६ जना बालबालिकाहरुको पिसिआर नेगेटिभ तर एन्टिबडी पोजेटिभ थियो। मृत्यु हुने बालकको उमेर १३ वर्षको थियो। मुटुमा समस्या आएका कारण ती बालकको मृत्यु भएको डा पौडेलले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘यी बालबालिकामा पिसिआर नेगेटिभ आएपनि कुनै बेला भाइरसको एक्सपोज भएका थिए। विदेशमा पनि यस्तै देखिएको थियो। बुवा आमा पोजेटिभ भए। बच्चामा संक्रमण भयो। तर बच्चालाई त्यो बेला केही भएन। पछि बनेको एन्टिबडीले असर गर्दा यस्तो समस्या देखियो।’
यसअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि एक बालकमा यो समस्या देखिएको थियो।
के हो मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटोरी सिन्ड्रोम?
मल्टि सिस्टम इन्फ्लामेटोरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन अर्थात् कोभिडपछि बालबालिकामा देखिने एक जटिलता अवस्था। वैज्ञानिकहरुले यसलाई ‘एमआइएस-सी’ को नाम दिएका छन्।
मल्टि सिस्टम इन्फ्लामेटोरी सिन्ड्रोमले कोभिडविरुद्ध बन्ने एन्टिबडीले शरीरमा निम्त्याउने जटिलतालाई बुझाउँछ। डा पौडेलका अनुसार कोभिड संक्रमणपछि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अत्यधिक सक्रिय हुने गर्छ, जसले शरीरका विभिन्न अंगमा असर गर्न सक्छ। मुटु, मिर्गौला, रक्त प्रणाली, पेट लगायत शरीरका विभिन्न प्रणालीमा असर गर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘यसले विशेष अंग सहित शरीरका विभिन्न प्रणालीमा असर गर्छ। कोभिडपछि बालबालिकामा देखिने यो एक प्रकारको जटिल अवस्था हो।’
कोरोना संक्रमित भइसकेका अभिभावक बढी चनाखो हुनुपर्नेमा डा पौडेल जोड दिन्छन्। लामो समय उच्च ज्वरो आए, पखाला लागे, पेट दुखे, ओठ र जिब्रो रातो भए, उल्टी गरे, खान मन नगरे तत्काल चिकित्ससँग परामर्श गन उनको सुझाव छ।
सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सन (सिडिसी) का अनुसार बालबालिकामा मल्टिसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम एक यस्तो जटिल अवस्था हो, जसमा शरीरका विभिन्न अंगहरु मुटु, फोक्सो, मिर्गौला, मस्तिष्क, छाला, आँखा र ग्यास्ट्रोस्टाइनल अगंहरु सुन्निन सक्छ। यसको यकिन कारण नभएपनि यो समस्या भएका बालबालिकामा कोभिड भाइरस पाइएको सिडिसीले उल्लेख गरेको छ।
-उच्च ज्वरो आउनु
-ओठ र जिब्रो रातो हुनु
-खान मन नलाग्नु
-आँखा रातो हुनु
-पिसाबमा रगत देखिनु
यसमा देखिने आपतकालीन चेतावनीका लक्षणहरु पनि विभिन्न छन्।
-श्वासप्रश्वासमा कठिनाई हुनु
-छातीमा दुखाई बढ्नु
-ओठ तथा अनुहार निलो हुनु
-गम्भीर खालका पेटको दुखाई हुनु।